Bhaibheri mune rimwe gore - Shona Bible SCLB - Kubvumbi 18
1. Zvino kuzoti Joshuwa afa, vaIsiraeri vakabvunza kuna Tenzi vachiti, “Ndivanaani pakati pedu vanofanira kutanga kundorwisa vaKanani?”
2. Tenzi akapindura achiti, “VokwaJudha ndivo vanoenda. Izvozvi ndakatoisa nyika iyoyo mumaoko avo.”
3. VokwaJudha vakati kuhama dzavo dzokwaSimeoni, “Hendei tose kunyika yatakagoverwa, tindorwisa vaKanani, isu tizondorwawo saizvozvo pamwechete nemi kunyika yenyu yamakagoverwa.” VokwaSimeoni ndokubva vaenda navo.
4. VokwaJudha vakaenda, Tenzi akaisa mumaoko avo vaKanani navaPerizi. Vakauraya varume gumi rezviuru kuBhezeki.
5. Vakasvikira Adhonibhezeki ari kuBhezeki vakamurwisa vakakurira vaKanani navaPerizi.
6. Adhonibhezeki ndokuti ware kutiza, asi vakamudzingirira, vakamubata, vakamudimura zvara zvake nezvigunwe zvake zvikuru.
7. Adhonibhezeki akati, “Ndaiva namakumi manomwe amadzimambo andakanga ndakadimura zvara zvawo mumaoko nezvigunwe zvawo zvikuru, chokudya vachiita chokutonongerera pasi petafura yangu yandaidyira. Nhasi uno Mwari anditsiva zvandakavaitira.” Vakaenda naye kuJerusaremu akandofirako.
8. Varume vokwaJudha vakarwisawo Jerusaremu vakarikurira vakauraya vanhu vomo namapakatwa, vakaripisa nomoto.
9. Shure kwaizvozvo varume vokwaJudha vakadzika, vakandorwisa vaKanani vaigara kunyika yamakomo, kuNegevhu nokunyika yokumanhika.
10. Vakavinga vaKanani vaigara muguta reHebhuroni, raimbonzi Kiriatiaribha, vakakurira Sheshai naAhimani naTarimai.
11. Vakabva ipapo vakavinga vanhu vaigara muguta reDhebhiri raimbonzi Kiriatiseferi.
12. Karebhu akanga ati, “Anenge arwisa Kiriatiseferi akarikurira ndinomupa mwana wangu Akesa kuti ave mukadzi wake.”
13. Otinieri mwanakomana waKenazi munun'una waKarebhu ndiye akarikurira. Karebhu ndokumupa mwanasikana wake Akesa kuti ave mukadzi wake.
14. Akesa paakauya kwaari, akamukurudzira kuti akumbire baba vake munda. Mukadzi iyeye akajitika padhongi rake, baba vake vakati, “Unodeiko mwanangu.”
15. Mukadzi uyu akati, “Zvamakandipa munda kuNegevhu, ndiitireiwo mwoyochena, mundipe zvisipiti zvemvura.” Karebhu ndokumupa zvisipiti zvemvura zveko zvokumusoro nezvisipiti zvezasi.
16. VaKeni zvizvarwa zvokwavatezvara vaMosesi vakabva kuguta remirara pamwechete nevokwaJudha, vakaenda kurenje rokwaJudha riri kuNegevhu pedyo neAradhi vakandogara pamwechete navanhu voko.
17. VokwaJudha vakaenda nehama dzavo dzokwaSimeoni vakakurira vaKanani vaigara muguta reZefati, vakariparadza zvokuparadza zviya. Saka guta iroro rakazonzi Horuma.
18. VokwaJudha ivava vakakurirawo guta reGaza namatunhu aro neAshikeroni namatunhu aro, neEkironi namatunhu aro.
19. Tenzi akava nevokwaJudha vakatora nyika yamakomo ikava yavo. Asi vakatadza kudzinga vanhu vokumapani nokuti vakanga vaine ngoro dzehondo dzesimbi.
20. Guta reHebhuroni rakapiwa kuna Karebhu sokutaura kwakanga kwaita Mosesi. Karebhu akadzingamo vanakomana vaAnaki vatatu.
21. Asi vokwaBhenjamini vakatadza kudzinga vaJebhusi vaigara muguta reJerusaremu. Saka vaJebhusi vagere muJerusaremu pamwechete nevokwaBhenjamini nanhasi uno.
22. Vemba yokwaJosefi vakakwira kundorwisa Bhetieri Tenzi aiva navo.
23. Vemba yokwaJosefi ivava vakatuma vanhu kundosora muguta reBhetieri. Kare zita reguta irori raimbonzi Ruzi.
24. Vasori ivavo vakaona murume akanga achibuda muguta imomo vakati kwaari, “Tiratidzewo panopindwa napo muguta, isu tigozokunzwirawo tsitsi.”
25. Akavaratidza paipindwa napo muguta iroro. Vakauraya vomuguta imomo namapakatwa. Asi vakarega murume uya kuti aende zvake nemhuri yake.
26. Murume uyu akaenda kunyika yavaHiti. Akavaka guta ikoko, akaritumidza zita rokuti Ruzi ndiro zita raro nanhasi uno.
27. VokwaManase havana kudzinga vagari vomumaguta aya anoti: Bhetisheani nemisha yaro, kwouya Taanaki nemisha yaro, kwochiti Dhori nemisha yaro kwoti Ibhereamu nemisha yaro kwozoti Megidho nemisha yaro. Asi vaKanani vakaramba vangotsungisawo mwoyo kugara munyika imomo.
28. VaIsiraeri pavakanga vava vanhu vane simba vakaitisa vaKanani basa rechibharo. Asi havana kubva vavadzinga zvokuvapedzeredza.
29. VokwaEfuraimu havanawo kudzinga vaKanani vaigara muGezeri. Asi vaKanani vakagara zvavo muGezeri mukati mavo.
30. VokwaZebhuruniwo havana kudzinga vagari vomuKitironi, kana vagari vomuNaharori. Asi vaKanani vakagara mukati mavo vokwaZebhuruni vakavabatisa chibharo.
31. VokwaAsheri havanawo kudzinga vagari vomuAko kana vagari vomuSidhoni, kanawo vagari vomuAhirabhu, kanawo vomuAkizibhu, kana vomuHeribha kana vomuAfiki, kunyange vomuRehobhu.
32. Asi vokwaAsheri ivava vakatogara zvavo mukati mavaKanani, vagari vomunyika iyoyo nokuti havana kuvadzinganisa.
33. VokwaNafutari havana kudzinga vagari vomuguta iri reBhetishemeshi, kana vagari vomuBhetianati, asi vakatogara zvavo mukati mavaKanani, vagari vomunyika iyoyo. Asi ivo vagari vomuBhetishemeshi nevomuBhetianati vaibatiswa chibharo.
34. VaAmori vakasundira vokwaDhani kunyika yamakomo nokuti havana kuvabvumidza kuburuka kubani.
35. VaAmori vakaramba vakatsungisa mwoyo kugara kugomo reHeresi nomuAijaroni nomuShaaribhimu. Asi vemba yokwaJosefi vakavakurira vakavabatisa chibharo.
36. Muganho wenyika yevaAmori waibvira kumupata weAkirabhimu woenda nokuSera zvichingokwira zvakangodaro.
1. Mutumwa waTenzi akabva kuGirigari akakwidza kuBhokimu. Akati, “Ndakakubvisai kuIjipiti ndikauya nemi kunyika yandakatsidzira kupa kune madzibaba enyu. Ndakati, ‘Handimbozofi ndakatyora chitenderano changu nemi.
2. Imiwo regai kuita chitenderano navanhu vomunyika ino. Munofanira kupwanya atari dzavo.’ Asi imi hamuna kuteerera zvandakareva. Ko ndochii ichochi chamaita?
3. Zvino ini ndinoti, ‘Handichafanokudzingirai vanhu ivava, asi vachava vavengi venyu uye vamwari vavo vari chinhu chakakuteyai.’ ”
4. Mutumwa waTenzi akati apedza kutaurira vaIsiraeri vose, vanhu vakaridza mhere kuchema.
5. Vakatumidza nzvimbo iyoyo zita rokuti Kuchema, vakabva vapira Tenzi zvibayiro ipapo.
6. Joshuwa paakati vaIsiraeri vachienda zvavo, vakati ava kwavo ava kwavo vachienda kunyika dzavo dzenhaka kundodzitora vachidziita dzavo.
7. Vanhu ivava vakanamata Tenzi panguva yose yakanga Joshuwa achiri mupenyu, nenguva yose yavakuru vakuru vakasiyiwa naJoshuwa variko vakanga vaona basa guru rose rakaitirwa vaIsiraeri naTenzi.
8. Joshuwa mwanakomana waNunu muranda waTenzi akafa ava nezana ramakore ana makore gumi.
9. Vakamuviga munyika yake yenhaka kuTimunatiheresi kunyika yaEfuraimu yamakomo kuchamhembe kwegomo reGaashi.
10. Chizvarwa ichocho chose chakapera kufa, kukazomukawo chimwe chizvarwa mushure mavo chakanga chisingamboziva Tenzi kana basa raakanga aitira vaIsiraeri.
11. VaIsiraeri vaiita zvakaipa zvisingadiwi naTenzi. Vainamata vanaBhaari.
12. Vaizvicheka ukama naTenzi Mwari wamadzibaba avo akavaburitsa kunyika yeIjipiti, voteveredzana zvavo navamwe vamwari vavanhu vakanga vari munharaunda yavo vachivapfugamira, vachivirutsa hasha dzaTenzi.
13. Vakachekana ukama naTenzi vonamata vanaBhaari naAshitaroti.
14. Saka hasha dzaTenzi dzaivirukira vaIsiraeri ovaisa mumaoko avapambi, vachivapamba, achivati kuche mumaoko avavengi vavo vomunharaunda yavo yose. Havaizogona kana kumirisana navavengi vavo.
15. Nguva dzose dzavaiti vondorwa, Tenzi aitenge orwisana navo kuti zvivaipire, sokuyambira kwakanga kwaita Tenzi nokuvatsidzira kwaakanga aita. Zvose izvozvo zvaivatambudza kwazvo mumwoyo.
16. Tenzi aizovamutsira vatongi vaivanunura mumaoko avanhu ivavo vaivapamba.
17. Kunyange zvakadaro vakange vasingateereri vatongi vavo ivavo nokuti vairamba vachingoita unzenza hwokuteveredzana navamwe vamwari vachivapfugamira. Vakanga vasingatani kutsauka nzira yaifambwa namadzibaba avo vaiteerera mitemo yaTenzi. Ivo havana kuita izvozvo.
18. Tenzi aiti kana avamutsira mutongi, aibva ava nomutongi iyeyo ovaponesa mumaoko avavengi vavo upenyu hwose hwomutongi iyeyo nokuti Tenzi ainzwa tsitsi nokugunguzika kwavo pamusana pavanhu ivavo vaivabata zvisina kunaka.
19. Asi painge mutongi iyeyo afa, vaipinduka votoita zvinhu zvakaipa kwazvo kupinda zvamadzibaba avo, votevera vamwe vamwari vachivanamata vachivapfugamira. Vaizongoramba vangoti dzvemere namabasa avo iwayo vasisasiyane nomusikanzwa wavo.
20. Naizvozvo Tenzi aizovirukira vaIsiraeri nehasha. Aizotiwo, “Vanhu ava zvavatyora chitenderano changu chandakatemera madzibaba avo vachirega kuteerera zvandinoreva,
21. neniwo kubvira zvino handichafanovadzingira marudzi api zvawo akasiyiwa arimo naJoshuwa, paakafa.
22. Navo ndichaedza vaIsiraeri kuti ndione kuti vachachengeta here gwara raTenzi raifamba madzibaba avo kana kuti kwete.”
23. Saizvozvo Tenzi akarega marudzi iwayo arimo, haana kubva akurumidza kuvadzinga vose pamwechete, haanawo kuvaisa mumaoko aJoshuwa.
1. Zioni guta raMwari TENZI mukuru anofanira kurumbidzwa zvikuru muguta raMwari wedu, mugomo rake rinoera.
2. Kuti dzu-u kwaro kunoyevedza, rinopa rufaro pasi pose. Iro gomo reZioni riri kuchamhembe iguta ramambo mukuru.
3. Mukati nhare dzaro dzokuzvidzivirira muhondo, Mwari akaratidza kuti ndiye mudziviriri wechokwadi
4. nokuti tarisai muone madzimambo akakokorodzana, vakauya kuzoita chirwirangwe.
5. Pavakazviona izvi, vakadumbirwa kwazvo zvakavatyisa ndokubva vati ware kutiza.
6. Vakadedera ipapo vakarwadziwa somudzimai ari pahata.
7. Makaparadza ngarava dzokuTarishishi nedutu rokumabvazuva.
8. Zvatakanzwa ndizvo zvatakaonawo muguta raTENZI wehondo nehondo, muguta raMwari wedu Mwari acharisimbisa nokusingaperi. Dzepfunde
15. Munhu asina pfungwa dzakadzama anongobvumira zvose zvose asi munhu wakangwara anotarisa paanotsika.
16. Mungwaru anochenjerera zvinhu uye anonzvenga zvakaipa asi benzi rinozviita suku nasai, harikendenge.
17. Munhu anokurumidza kushatirwa zvaanoita ndezvoupenzi asi munhu anoona zvinhu nemazvo anoita mwoyo murefu.
1. Nerimwe zuva reSabata, Jesu paakaenda kune imwe imba yomumwe mutongi aive webato ravaFarisei. Vakanga vachiongorora zvaachaita.
2. Hezvo pakava nomumwe murume aiva nechirwere chemhuka.
3. Jesu akataura kunyanzvi dzomutemo navaFarisei achiti, “Zviri pamutemo here kana kuti kwete kuporesa nomusi weSabata?”
4. Asi vakaramba vanyerere. Ipapo akamutora akamuporesa akamuti aende zvake.
5. Akati kwavari, “Ndiani wenyu angati ane mwanakomana wake kana mombe yake inenge yawira mutsime asingabva aikwevera kunze nezuva reSabata.”
6. Havana kukwanisa kupindura izvi.
7. Akapa muenzaniso kune vakakokwa paakanga aona vachisarudza zvigaro zvavakuru vakuru achiti kwavari,
8. “Kana uchinge wakokwa nani zvake kumabiko omuchato, rega kugara pachigaro chavakuru vakuru. Pangadaro pakakokwa munhu mukuru kupfuura iwe.
9. Zvino iye akukokai mose angauye oti kwauri chipa nzvimbo yako kune munhu uyu. Ndipo paunozotangisa, kundogara pachigaro chevepasi pasi uchinyara.
10. Asi kana wakakokwa enda undogara panzvimbo yapasi pasi kuitira kuti uya akukoka akauya, ati kwauri, ‘Shamwari kwira kumusoro.’ Unobva waremekedzwa pamberi pavanhu vose vagere pakudya newe,
11. nokuti munhu wose anozvikudza achaninipiswa. Nouyo anozvininipisa achakudzwa.”
12. Akataurirawo munhu akanga amukoka achiti, “Kana wagadzira chokudya kana mabiko, rega kukoka shamwari dzako kana vakoma navanun'una vako, kana hama dzako kana kuti vavakidzani vako vapfumi nokuti vangadaro vakazokukokawo uchizoripwa.
13. Asi kana waita mabiko, koka varombo nezvirema nemhetamakumbo, namapofu.
14. Uchakomborerwa nokuti havagoni kuzokudzorerawo. Unozodzorerwa pakumuka kwavakarurama.”
15. Mumwe munhu akanga agere naye pakudya paakanzwa izvi, akati kwaari, “Akakomborerwa zvake achadya zvokudya muumambo hwaMwari.”
16. Asi Jesu akati kwaari, “Mumwe munhu akaita mabiko makuru, akakoka vanhu vakawanda.”
17. Panguva yamabiko akatuma varanda vake kune vakanga vakokwa vaya achiti, “Chiuyai, zvinhu zvose zvino zvagadzirwa;
18. asi zvimwechetezvo, vose zvavo, vakatanga kupa zvikonzero. Wokutanga akati, ‘Ndatenga purazi, ndinofanira kundoiona, ndinokumbira kuti mundiregererewo.’
19. Mumwewo akati, ‘Ndatenga zvipani zvamadhonza zvishanu, ndinofanira kuenda ndimbondoaedza. Ndinokumbirai kuti mundiregererewo.’
20. Mumwewo akati, ‘Ndaroora mudzimai nezvo handigoni kuuya.’
21. Saizvozvo muranda akauya akataurira izvi kuna tenzi wake. Saimba akashatirwa akati kumuranda wake, ‘Kurumidza kuenda kumigwagwa yeguta nomumikoto yaro uunze varombo navakaremadzwa namapofu navakaremara.’
22. Muranda akati, ‘Changamire zvamati zviitwe zvaitwa asi nzvimbo ichiripo.’
23. Tenzi akati kumuranda, ‘Enda kumigwagwa nomumaheji ugombedzere vanhu kupinda kuti imba yangu izare.
24. Nokuti ndinokutaurirai kuti hapana kana nomumwechete waavo vakakokwa acharavira mabiko angu.’ ”